Izindlu e- Tita - I-Airbnb
Izindlu e- Tita
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Zadis
U-Zadis Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elizimele elisezingeni lesibili esikhungweni esingokomlando saseSantiago de Cuba, elinegumbi elinomoya opholile elinamanzi ashisayo nabandayo, ithelevishini, isiqandisi, ikhishi elihlomele lapho amakhasimende angalungisa khona ukudla kwawo uma efisa, isitofu segesi, ugesi, izitsha. Imizuzu eyi-10 ukusuka esikhumulweni sesitimela nesebhasi. Imizuzu engu-15 ukusuka epaki elimaphakathi nezinye izingosi zomlando nezamasiko.
Sikhuluma isiNgisi, isiFulentshi, isiRashiya nesiPutukezi
4.86 · 120 okushiwo abanye
Yindawo emaphakathi nedolobha, lapho ungabona khona impilo eyiqiniso yabantu baseCuba, omakhelwane abanobungane kakhulu futhi abathule, ungahamba uye ezindaweni ezinentshisekelo yomlando namasiko, sihlinzeka ngezinto zokuhamba zohambo oluya ogwini, amapaki emvelo. , ihhashi ogibele, ect
sizotholakala kuzo zonke izidingo zakho
UZadis Ungumbungazi ovelele
Izilimi: English, Français, Português, Русский, Español